ဆာရီရဲ့လက်ထက်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်း ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ
ဆာရီ Maurizio Sarri လက်ထက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားပုံကို လေ့လာကြည့်ရအောင်
23 Nov 2018 . 12:49 PM
ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ဒီရာသီအစက စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ဆာရီ Maurizio Sarri ဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ အသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်၊ ယူရိုပါလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲမရှိအောင် စွမ်းဆောင်ထားသူပါ။ ဆာရီဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နည်းပြမဟုတ်ရင်တောင် အဲဒီစာရင်းမှာ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမယ့်သူဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ သူဟာ Philosopher တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အမှန်တကယ်ဖြစ်အောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Possession ဦးစားပေး ပုံစံကြောင့် ‘Sarriball’ လို့ အမည်ပြောင်သတ်မှတ်ခံထားရသူ ဆာရီဟာ နာပိုလီကို ကိုင်တွယ်ခဲ့စဉ်က Style အတိုင်းပဲ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဆာရီလက်ထက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားဟန်ကို လေ့လာကြည့်ရအောင် . . . .
Sarriball ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး သဘောတရား
ဆာရီရဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ သူတို့ Defensive Third ဇုန်ထဲမှာ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာရဖို့က အဓိက ဦးစားပေးပါပဲ။ ခံစစ်မှာ ဘောလုံးပုတ်မယ်၊ ပြီးရင် တိုက်စစ်ကို တိုက်ရိုက်စတင်မယ်။ အဲဒီအတွက် အခရာကျတာက ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ် David Luiz ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Ball Playing Defender ဖြစ်လို့ တိုက်စစ်ပြန်စရင် အားကိုးရတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ကွင်းလယ်မှာ ပြိုင်ဘက်ကို Press လုပ်မယ်၊ အဲဒီမှာ ပြိုင်ဘက်က အမှားလုပ်မိရင်ရင် ဘောလုံးပြန်ကိုင်ပြီး ကွင်းလယ်စီးအောင် ကြိုးစားပါတယ်။ Attacking Third ဇုန်ထဲမှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကြောင်းကို Vertical Passes တွေနဲ့ အတွင်းထဲထိ ထိုးဖောက်ကစားလေ့ရှိတယ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်း ခံစစ်တည်ဆောက်ပုံက သိပ်သည်းပါတယ်။ Fullbacks တွေက တိုက်စစ်အထိ လိုက်ပါကစားပြီး မားကို့စ်အလွန်ဆို Marcos Alonso က တိုက်စစ်ကို အချိန်တိုင်း လိုက်ပါခွင့်ရှိပေမယ့် ညာနောက်ခံလူ အက်ဇ်ပီလီကွယ်တာ Cesar Azpilicueta ကတော့ ကိုယ့်အသင်းကွင်းတစ်ဝက်ခြမ်းအထိပဲ တိုက်စစ်ကို လိုက်လေ့ရှိတယ်။
ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ်က ဘယ်ကစားသမားကို ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာက ကောင်းကောင်းသိပြီး အမြင့်ဘောတွေနဲ့ တိုက်စစ်ကို စတင်ရတဲ့တာဝန် ယူထားတယ်။ ရူဒီဂါ Rudiger ကတော့ ခံစစ်မှာအထိုင်ကစားပြီး ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်ကို ဟန့်တားဖို့ပါပဲ။
ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ Final Third ဇုန်မှာ အခွင့်အရေးကောင်းတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား အများကြီး ချယ်လ်ဆီးမှာ ရှိပါတယ်။ ကိုဗာချစ် Kovacic ဒါမှမဟုတ် ဘာကလေ Barkley တို့ဟာ ကွင်းလယ်မှာ Rotate ကစားပြီး ကွန်တေ Kante က ခံစစ်ကို ကူနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့က တိုက်စစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ကစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ဆာရီက ခံစစ်ကို ကူတဲ့တာဝန်ကို ယော်ဂျင်ဟို Jorginho ဆီ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ကွန်တေဟာ တိုက်စစ်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လိုက်ပါခွင့်ရှိသွားပါပြီ။ ဒီပုံစံကြောင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ Attacking က ပြိုင်ဘက်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိနေတာပါ။
တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမား ဟာဇက် Eden Hazard က ပြိုင်ဘက်ခံစစ်အတွင်း ဆွဲပြေးဝင်သွားချိန်မှာ မားကို့စ်အလွန်ဆိုက တောင်ပံမှာနေရာယူပြီး ဖြတ်တင်ဘောတွေနဲ့ တိုက်စစ်ကို Provide လုပ်တယ်။ ဟာဇက် အတွင်းဝင်လာချိန်မှာ တိုက်စစ်မှူး မိုရာတာ Morata က (၁၆)ကိုက်စည်းထဲ အသင့်ရှိနေပြီး ဂိုးသွင်းဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဟာဇက် ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးဖို့ တာဝန်ယူထားပါတယ်။ ၀ီလီယံ Willian / ပတ်ဒရို Pedro တို့က ခံစစ်၊ တိုက်စစ် မျှအောင် ကစားပေးရတယ်။ တကယ်လို့ အက်ဇ်ပီလီကွယ်တာဟာ တိုက်စစ်ကို မလိုက်ပါတဲ့အချိန်မှာ ညာတောင်ပံကစားသမားက ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကြောင်းထဲအထိ ဆွဲဝင်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ ဖြတ်တင်ဘောတွေနဲ့သာ ကစားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမား
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ၀င်ရိုးတစ်ခုလုံးမှာ အဓိက ကျသူက ယော်ဂျင်ဟို Jorginho လို့ သတ်မှတ်ရမယ်။ သူဟာ Deep Lying Midfielder အဖြစ် တာဝန်ယူထားပြီး ခံစစ်ကြောင်းကို Cover လုပ်ဖို့အပြင် တိုက်စစ်ပြန်စရင်လည်း တိကျတဲ့အမြင့်ဘောတွေနဲ့ ကူညီပေးရသူပါပဲ။ ယော်ဂျင်ဟိုဟာ ဆာရီနဲ့ နာပိုလီမှာ လက်တွဲဖူးသူဖြစ်သလို အခုချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာလည်း အဓိက အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ မန်စီးတီးနဲ့ (၄)မှတ်အကွာ အဆင့်(၃)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုအတွက် ပြေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေဆဲပါပဲ။ တိုက်စစ်မှူးတွေဖြစ်တဲ့ မိုရာတာ Morata ၊ ဂျရူး Giroud တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်သာ အခုထက် ပိုကောင်းလာမယ်ဆိုရင် ဆုဖလားမျှော်လင့်ချက်တွေက အသက်ဝင်လာမယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
Photo:We Ain’t Got No History,ESPN,Ghanasoccernet,The Independent,101 Great Goals,Live TV,Chelsea Season
ဆာရီ Maurizio Sarri လကျထကျ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ကစားပုံကို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ
ခယျြလျဆီးအသငျးကို ဒီရာသီအစက စတငျကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ဆာရီ Maurizio Sarri ဟာ လကျရှိအခြိနျအထိ အသငျးကို ပရီးမီးယားလိဂျ၊ ယူရိုပါလိဂျမှာ ရှုံးပှဲမရှိအောငျ စှမျးဆောငျထားသူပါ။ ဆာရီဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး နညျးပွမဟုတျရငျတောငျ အဲဒီစာရငျးမှာ မဖွဈမနထေညျ့သှငျးရမယျ့သူဆိုတာ သံသယဖွဈစရာမလိုပါဘူး။ သူဟာ Philosopher တဈဦးဖွဈပွီး စိတျကူးအိပျမကျတှကေို အမှနျတကယျဖွဈအောငျ အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျသူလညျးဖွဈပါတယျ။
Possession ဦးစားပေး ပုံစံကွောငျ့ ‘Sarriball’ လို့ အမညျပွောငျသတျမှတျခံထားရသူ ဆာရီဟာ နာပိုလီကို ကိုငျတှယျခဲ့စဉျက Style အတိုငျးပဲ ခယျြလျဆီးအသငျးကို ပုံစံပွောငျးလဲခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆာရီလကျထကျ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ကစားဟနျကို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ . . . .
Sarriball ရဲ့ အခွခေံအကဆြုံး သဘောတရား
ဆာရီရဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ သူတို့ Defensive Third ဇုနျထဲမှာ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသာရဖို့က အဓိက ဦးစားပေးပါပဲ။ ခံစဈမှာ ဘောလုံးပုတျမယျ၊ ပွီးရငျ တိုကျစဈကို တိုကျရိုကျစတငျမယျ။ အဲဒီအတှကျ အခရာကတြာက ဒေးဗဈလူးဝဈဇျ David Luiz ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ Ball Playing Defender ဖွဈလို့ တိုကျစဈပွနျစရငျ အားကိုးရတဲ့ကစားသမားတဈဦးပါပဲ။
ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ကှငျးလယျမှာ ပွိုငျဘကျကို Press လုပျမယျ၊ အဲဒီမှာ ပွိုငျဘကျက အမှားလုပျမိရငျရငျ ဘောလုံးပွနျကိုငျပွီး ကှငျးလယျစီးအောငျ ကွိုးစားပါတယျ။ Attacking Third ဇုနျထဲမှာတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ပွိုငျဘကျခံစဈကွောငျးကို Vertical Passes တှနေဲ့ အတှငျးထဲထိ ထိုးဖောကျကစားလရှေိ့တယျ။
ခယျြလျဆီးအသငျး ခံစဈတညျဆောကျပုံက သိပျသညျးပါတယျ။ Fullbacks တှကေ တိုကျစဈအထိ လိုကျပါကစားပွီး မားကို့ဈအလှနျဆို Marcos Alonso က တိုကျစဈကို အခြိနျတိုငျး လိုကျပါခှငျ့ရှိပမေယျ့ ညာနောကျခံလူ အကျဇျပီလီကှယျတာ Cesar Azpilicueta ကတော့ ကိုယျ့အသငျးကှငျးတဈဝကျခွမျးအထိပဲ တိုကျစဈကို လိုကျလရှေိ့တယျ။
ဒေးဗဈလူးဝဈဇျက ဘယျကစားသမားကို ဘယျလိုပေးရမလဲဆိုတာက ကောငျးကောငျးသိပွီး အမွငျ့ဘောတှနေဲ့ တိုကျစဈကို စတငျရတဲ့တာဝနျ ယူထားတယျ။ ရူဒီဂါ Rudiger ကတော့ ခံစဈမှာအထိုငျကစားပွီး ပွိုငျဘကျတိုကျစဈကို ဟနျ့တားဖို့ပါပဲ။
ပွိုငျဘကျအသငျးရဲ့ Final Third ဇုနျမှာ အခှငျ့အရေးကောငျးတှကေို ဖနျတီးပေးနိုငျတဲ့ ကှငျးလယျတိုကျစဈကစားသမား အမြားကွီး ခယျြလျဆီးမှာ ရှိပါတယျ။ ကိုဗာခဈြ Kovacic ဒါမှမဟုတျ ဘာကလေ Barkley တို့ဟာ ကှငျးလယျမှာ Rotate ကစားပွီး ကှနျတေ Kante က ခံစဈကို ကူနတေဲ့အခြိနျမှာ သူတို့က တိုကျစဈနဲ့ ခြိတျဆကျကစားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခု ဆာရီက ခံစဈကို ကူတဲ့တာဝနျကို ယျောဂငျြဟို Jorginho ဆီ လှဲပွောငျးခဲ့ပွီဖွဈလို့ ကှနျတဟော တိုကျစဈကို လှတျလှတျလပျလပျ လိုကျပါခှငျ့ရှိသှားပါပွီ။ ဒီပုံစံကွောငျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ Attacking က ပွိုငျဘကျကို ခွိမျးခွောကျနိုငျစှမျးရှိနတောပါ။
တောငျပံတိုကျစဈကစားသမား ဟာဇကျ Eden Hazard က ပွိုငျဘကျခံစဈအတှငျး ဆှဲပွေးဝငျသှားခြိနျမှာ မားကို့ဈအလှနျဆိုက တောငျပံမှာနရောယူပွီး ဖွတျတငျဘောတှနေဲ့ တိုကျစဈကို Provide လုပျတယျ။ ဟာဇကျ အတှငျးဝငျလာခြိနျမှာ တိုကျစဈမှူး မိုရာတာ Morata က (၁၆)ကိုကျစညျးထဲ အသငျ့ရှိနပွေီး ဂိုးသှငျးဖို့ ဒါမှမဟုတျ ဟာဇကျ ဂိုးသှငျးနိုငျအောငျ ဖနျတီးပေးဖို့ တာဝနျယူထားပါတယျ။ ဝီလီယံ Willian / ပတျဒရို Pedro တို့က ခံစဈ၊ တိုကျစဈ မြှအောငျ ကစားပေးရတယျ။ တကယျလို့ အကျဇျပီလီကှယျတာဟာ တိုကျစဈကို မလိုကျပါတဲ့အခြိနျမှာ ညာတောငျပံကစားသမားက ပွိုငျဘကျခံစဈကွောငျးထဲအထိ ဆှဲဝငျတာမြိုး မလုပျဘဲ ဖွတျတငျဘောတှနေဲ့သာ ကစားတာကို တှရေ့မှာပါ။
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမား
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ဝငျရိုးတဈခုလုံးမှာ အဓိက ကသြူက ယျောဂငျြဟို Jorginho လို့ သတျမှတျရမယျ။ သူဟာ Deep Lying Midfielder အဖွဈ တာဝနျယူထားပွီး ခံစဈကွောငျးကို Cover လုပျဖို့အပွငျ တိုကျစဈပွနျစရငျလညျး တိကတြဲ့အမွငျ့ဘောတှနေဲ့ ကူညီပေးရသူပါပဲ။ ယျောဂငျြဟိုဟာ ဆာရီနဲ့ နာပိုလီမှာ လကျတှဲဖူးသူဖွဈသလို အခုခယျြလျဆီးအသငျးမှာလညျး အဓိက အခနျးကဏ်ဍကနေ ပါဝငျနသေူဖွဈပါတယျ။
အခုလောလောဆယျ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ မနျစီးတီးနဲ့ (၄)မှတျအကှာ အဆငျ့(၃)နရောမှာ ရပျတညျနပွေီး ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံဆုအတှကျ ပွေးလမျးကွောငျးပျေါမှာ ရှိနဆေဲပါပဲ။ တိုကျစဈမှူးတှဖွေဈတဲ့ မိုရာတာ Morata ၊ ဂရြူး Giroud တို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျသာ အခုထကျ ပိုကောငျးလာမယျဆိုရငျ ဆုဖလားမြှျောလငျ့ခကျြတှကေ အသကျဝငျလာမယျလို့ သတျမှတျရမှာဖွဈပါတော့တယျ . . .